कोरोनाबाट एकैदिन २७ जनाको मृत्यु ! - Sagarmatha Online News Portal
कोरोनाबाट एकैदिन २७ जनाको मृत्यु !
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप २७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौंका ६ जना, सुनसरीका ५ जना, कास्कीका ४ जना, सप्तरीका ३ जना, मोरङ र बागलुङका २/२ जना, उदयपुर, सिरहा, भक्तपुर, तनहुँ र दाङका १/१ जनाको मृत्यु भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित अस्पतालहरुले जानकारी दिएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका-१५ मोरङकी ५५ वर्षकी महिलाको मंगलबार दिउँसो ४ बजे नोबेल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । ज्वरो, रुघाखोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि अस्पताल लगिएको उनको मृत्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिका-११ मोरङका ४९ वर्षका पुरुषको मंगलबार विहान ३: ३० बजे बिराटनगर न्युरो अस्पतालको कोभिड-१९ उपचार केन्द्रमा मृत्यु भएको छ । १४ कात्तिकमा अस्पताल भर्ना भएका उनमा सोही दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
इनरुवा नगरपालिका-१ सुनसरीकी ४५ वर्षकी महिलाको मंगलबार दिउँसो साढे २ बजे विराट शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । कात्तिक १४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका-३ सुनसरीका ४८ वर्षका कोरोना संक्रमित पुरुषको सोमबार साँझ ७ बजे विराट शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । उनी ३ कात्तिकमा भर्ना भएका थिए ।
धरान उपमहानगरपालिका-१६ सुनसरीका ७६ वर्षका पुरुषको मंगलबार विहान विराट शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि कात्तिक ९ गते उनलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
धरान उपमहानगरपालिका-१५ सुनसरीका ६३ वर्षका पुरुषको मंगलबार विहान ३ः५० बजे विराटनगरको न्युरो अस्पतालको कोभिड– १९ उपचार केन्द्रमा मृत्यु भएको छ । २७ असोजमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनी कात्तिक १२ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
धरान उपमहानरगपालिका-९ सुनसरीका ६१ वर्षकी महिलाको मंगलबार दिउँसो मृत्यु भएको छ । कात्तिक ५ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उनलाई कात्तिक १८ गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
चौदण्डीगढी नगरपालिका-६ उदयपुरका ४८ वर्षका पुरुषको सोमबार साति १२ बजेतिर मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई उपचारका लागि कात्तिक १२ गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
सुखीपुर सिराहाका ७४ वर्षका पुरुषको सोमबार राति ११ बजेतिर विराट शिक्ष(ा अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी कात्तिक १५ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका-२ सप्तरीका ५३ वर्षका पुरुषको न्युरो अस्पताल विराटनगरको कोभिड उपचार केन्द्रमा सोमबार राति मृत्यु भएको छ । ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने लक्षण देखिएपछि कात्तिक १४ गते विराट अस्पताल भर्ना भएका उनमा कात्तिक १५ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उनलाई न्युरो अस्पताल पठाइएको थियो ।
महादेवा गाउँपालिका-६ सप्तरीका ३० वर्षका पुरुषको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरामा सोमबार राति मृत्यु भएको छ । झाडापखाला लागेपछि आइतबार अस्पताल भर्ना भएका उनमा मृत्युपछि कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
अग्निसाइर कृष्णसावरण गाउँपालिका-५ सप्तरीका ६२ वर्षका पुरुषको विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा कात्तिक १३ गते मृत्यु भएको छ । उनको मृत्युपछि मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । ज्वरो आएपछि कात्तिक ८ गते अस्पताल भर्ना भएका उनमा कात्तिक १२ गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौंका ५६ वर्षका पुरुषको कात्तिक १६ गते मृत्यु भएको छ । निमोनिया र मुटुको समस्या भई कात्तिक १५ गते अस्पताल भर्ना भएका उनमा कात्तिक १६ गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
टोखा नगरपालिका काठमाडौंका ९७ वर्षका पुरुषको कात्तिक १७ गते मृत्यु भएको छ । निमोनिया भई कात्तिक १५ गते अस्पताल भर्ना भएका उनमा कात्तिक १६ गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
काठमाडौंका ८४ वर्षका पुरुषको कात्तिक १७ गते मृत्यु भएको छ । निमोनिया र मुटुको समस्या भई कात्तिक १६ गते अस्पताल भर्ना भएका उनमा कात्तिक १७ गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनी मिर्गौलाका बिरामी थिए ।
काठमाडौंकी ७१ वर्षकी महिलाको मंगलबार निधन भएको छ । निमोनिया भई कात्तिक ११ गते अस्पताल भर्ना भएकी उनमा सोही दिन संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनी दमको बिरामी थिइन् ।
काठमाडौंका ७० वर्षका पुरुषको कात्तिक १६ गते मृत्यु भएको छ । असोज २० गते संक्रमण पुष्टि भएको र निमोनिया भई असोज २५ गते अस्पताल भर्ना भएका उनी दम, उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामी थिए ।
काठमाडौंका ७५ वर्षका पुरुषको मंगलबार मृत्यु भएको छ । श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि कात्तिक १२ गते अस्पताल भर्ना भएका उनमा त्यसै दिन संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
थिमी भक्तपुरका २० वर्षका पुरुषको मंगलबार मृत्यु भएको छ । निमोनिया, शक र मुटुको समस्या भई कात्तिक १७ गते अस्पताल भर्ना भएका उनमा सोही दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनी मिर्गौलाका बिरामी थिए ।
पोखरा महानगरपालिका-५ कास्कीका ५९ वर्षकी महिलाको सोमबार राति ११ बजे मृत्यु भएको छ । उनलाई कात्तिक १४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिका-१६ कास्कीका ५५ वर्षका पुरुषको मंगलबार दिउँसो पौने १२ बजे मृत्यु भएको छ । उनमा कात्तिक १४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिका-६ कास्कीका ७२ वर्षका पुरुषको सोमबार विहान ४ः१५ बजे मृत्यु भएको छ । उनमा कात्तिक १४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिका-३ कास्कीका ५२ वर्षका पुरुषको सोमबार विहान ११ः४५ बजे मृत्यु भएको छ । उनमा कात्तिक १२ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
बागलुङ नगरपालिका-३ बागलुङका ६६ वर्षका कोरोना संक्रमित पुरुषको मंगलबार विहान १०ः२० बजे मृत्यु भएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका-३ बागलुङका ६१ वर्षका पुरुषको सोमबार बेलुकी ५ः३० बजे मृत्यु भएको छ । उनलाई सोमबार नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
ब्यास नगरपालिका-५ तनहुँका ६६ वर्षका पुरुषको सोमबार विहान २ः१५ बजे मृत्यु भएको छ । उनमा कात्तिक १६ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
घोराही उपमहानगरपालिका-१० दाङकी ६५ वर्षकी महिलाको मंगलबार दिउँसो ३ बजे कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । कात्तिक १७ गते अस्पताल भर्ना भएकी उनमा सोही दिन संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।